Sheekh Aadan Siiro oo Ceeb Qaran ku Tilmaamay in Hablo Yaryar Lagu Celiyo Dalal Waalidkoodu Kala soo Baxsaday | Togdheer News Network
Sheekh Aadan Siiro oo Ceeb Qaran ku Tilmaamay in Hablo Yaryar Lagu Celiyo Dalal Waalidkoodu Kala soo Baxsaday
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland oo xaqiijiyey in habluhu go’aansadeen in lagu celiyo dalalka ay baasaboorkooda haystaan
Hargeysa (Togdhnews)- Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray (Sheekh Aadan-siiro) oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka, ayaa tilmaamay inay ceeb qaran tahay go’aanka lagu gaadhay in dawladaha reer Yurub dib loogu celiyo hablo yaryar oo waalidkoodu u keeneen Somaliland si ay u bartaan diintooda islaamka iyo dhaqankooda suuban.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa xaqiijiyey in hablaha yaryar ay go’aansadeen in lagu celiyo dalalka ay baasaboorkooda haysteen marka laga reebo laba hablood oo jeclaystay inay la joogaan waalidkooda Somaliland.
“Hablahaasi waxay ahaayeen hablo mudakar ah, markii ay soo baxday in xaaladda halkan lagu hayey ay ahayd xaalad adag, waxa ay wergeliyeen dawladahoogii (ay baasaboorkooda haysteen), cid ka socoto dawladahoogii ayaa timmi (Hargeysa). Markii hablaha la weydiiyey in iyagu go’aanka u dambaysa ay leeyihiin haddii ay doonayaan inay joogaan oo waalidkooda raacaan iyo haddii ay doonayaan inay safaaradahooga raacaan waxa ay wada go’aansadeen in la celiyo, marka laga reebo laba habloodo oo iyagu sheegay inay waalidkooda la joogayaan, markaa mid walba iyadoo miyirkeeda qabta ayey go’aansadeen in la celiyo,” ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shirre oo waraysi siiyey telefiishanka STAR TV shalay.
Hasa yeeshee, khudbad Sheekh Aadan Siiro ka jeediyey masjidka Xawaadle ee caasimadda Hargeysa maalintii Jimcaha, waxa uu go’aan aan sax ahayn oo qalad ah ku sifeeyey in hablo da’doodu u dhexayso 15 sanno ilaa 20 jir gacanta loo geliyo dadka aan islaam ahayn, isla markaana lagu celiyo dalal waalidkoodu kala soo baxsadeen markii ay ka baqeen inay naftooda iyo diintooduba halis gasho, kuwaasoo lagu hayey xarun lagu baro diinta islaamka iyo dhaqanka wanaagsan oo ku taal Hargeysa.
“Waxa Hargeysa la keenay bablo, waxaana looga furay iskuul, hablahaa waxa keentay inan ka mid ah dadka dalka u dhashay, habluhuna waxay ahaayeen hablo dalka loo keenay dhaqan-celis. Sidaan wararka ku helayna qaabka loo maamulay muu ahayn qaab qurux badan (intii ay boodhinka lagu hayey), laakiin dhacdada ka sii layaabka badan waxa weeyaan gaaladii dalalkaa (ay habluhu ka yimaaddeen) oo dhan baa Hargeysa yimmi, gaaladaasi waxa leeyihiin (yidhaahdeen) hablahani way nala soo xidhiidheen, markaa waxaannu doonaynaa inaanu ku celinno dalalkayaga ay baasaaboorradooda sitaan. Waxa igu maqaalo ah in masuuliyiin Dawladda ka mid ahi yidhaahdeen waxaannu hablaha kala dooransiinaynaa inay gaalada raacayaan iyo inay waalidkooda raacayaan. Inanta yar ee ku kortay nolosha khayaaliga ee nimankaasi (Reer Yurub) samaysteen (maxay odhan markaa). Marka horeba dedaal-baa (waalidku ku keenay hablaha), markaa qaabka lagu keenay ha khaldanaado amma ha saxsanaado’e, waxa la is lahaa wanaag iyo dhaqan ha ka soo helaan (markii dalka la keenayay), markaa nniga oo aan difaacaynin dadkii hayey oo la leeyahay qaabkay hablahaa u hayeen qaab qurux badan muu ahayn, waxaan ka hadlayaa ta culimada u taalla, ta waddanka u taalla ayaan ka hadlayaa, ta kuwan Masuuliyadda qaaday u taalla ayaan ka hadlayaa,” ayuu yidhi Sheekh Aadan Siiro.
Waxa kaloo sheekhu sheegay in aan la aqbali karin in hablaha yaryar oo aan waalidkooda gacmaha laga gelin, lagu wareejiyo masuuliyiin ka socda dalalkii laga keenay oo Hargeysa yimmi.
“Maraykan ha ahaado ama kuwa cirka ka soo daata ha ahaadee wax la caqbali karayo maaha in hablaha lagu yidhaahdo ma waalidiintiina ayaad raacaysaan, mise kuwaas ayaad raacaysaan (gaalada)? Bal ilmaha yar ee Yurub iyo Maraykan laga keenay ee dalka dhaqan-celin loo keenay, ee aan ku qanacsanayn halkan waalidku ula soo cararray, haddii aad tidhaahdo ma kaasaad raacaysaa mise halkan baad joogaysaa, dee jawaabtii waa la hayaa,” ayuu yidhi Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray.
Waxaannu intaas raaciyey; “Waxaan leeyahay waar dalka ha ceebaynina, caqli iyo sharci ahaana ma aqbalayno, ummadduna lama qabto arrintaa (Xukuumadda). Arrin culimada iyo inta dareenka lihi la qabto maaha.”
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray, ayaa sidoo kale tilmaamay inay wanaagsanayd in xukuumaddu gacan ka gaysato sidii waalidiinta hablaha dhalay eek u nool dalalka Yurub loo keeni lahaa Somaliland si aan dhibaato loo gaadhsiin.
“Haddii carruurta waalidkooda loo yeedhayo xiitaa kharashka idinku bixiya (Xukuumaddaay) oo qof walba waalidkiisa doona oo dalka ha yimaaddo, lacagta tigidhada ee aad bixinaysaan ma idinkaa leh? Ummaddaa leh hantida ay hayaan oo dhan, ku bedbaadiya carruurtiina, ka dibna carruurta gacanta ka geliya waalidkiisa, markaa waalidku ama Yurub haku celiyo ama tuuladii Aabbahood ku dhashay ha geeyo carruurta. Haddii ay Dawladdu leedahay ma awoodno 22 tigidh oo waalidka carruurtaasi dalka ku imanayo Annagaa ummadda uga ururrinayna, laakiin ilmaha (in aanay awoodeyn dawladdu) waar waad awoodaysaan ee tigidhada (Diyaaradda) bixiya oo waalidka u yeedha, carruurtooda ha u caqli celiyaan,” ayuu yidhi Sheekh Aadan Siiro.
Waxa sheekhu walaac ka muujiyey in hablaha dib loo celiyey ay waalidkooda ka dacweeyaan dalalka ay dhalashooyinkooda haystaan, “Waxa ka daran waalidkaa miskiinka ah ee laga yaabo inuu Yurub ka shaqeysanayo waxa laga yaabaa in ilmahaasi (marka la celiyo) uu ashkateeyo oo qaarkood 20 ama 30 sannadood loo jaro (xabsi), Waayo? imminkaba iyagaa carruurtu warka gudbiyey,” ayuu yidhi Sheekh Aadan, waxaannu intaa ku daray oo uu sheegay inaan la aqbali karin in Wasiirro Xukuumadda Somaliland ka mid ahi Hablaha kala dooransiiyaan inay raacayaan Waalidkooda iyo in kale, “Wax la caqbali karayo maaha inta Wasiirro soo fadhiistaan inay carruurta ku yidhaahdaan haddii aad gaalada raacaysaana diyaar baanu u nahay, haddii aad waalidkiina raacaysaana diyaar baanu u nahay.”